राजकुमारीको आफ्नै ब’डीगार्डसँग अ’वैध सम्बन्ध, चुप ला’ग्नका लागि दिइन् १९ करोड ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /International/राजकुमारीको आफ्नै ब’डीगार्डसँग अ’वैध सम्बन्ध, चुप ला’ग्नका लागि दिइन् १९ करोड !
काठमाडौं। दु’बइका शा’सक शे’ख मो’हम्मद बि’न रा’शिद अ’ल म’कतुमकी पत्नी राजकुमारी ह’या बि’न्त हु’सेनको आफ्नै ब’डीगार्डसँग अ’वैध सम्बन्ध भएको खुलेको छ । बेलायती ना’गरिक रहेका ती ब’डीगार्डलाई चु’प ला’ग्नको लागि राजकुमारी हयाले १.२ मि’लियन पाउण्ड (१९ करोड रुपैयाँ) र महंगा उपहारहरु दिएको डेलीमेलले दा’वी गरेको छ । राजकुमारीले ब’डीगार्डलाई १२ हजार पा’उण्ड पर्ने घडी, ५० हजार पाउण्ड पर्ने पुरानो श’टग’नसहितका उपहार दिएको रिपोर्टमा दा’वी गरिएको छ ।बेलायतको अदालतका चलेको सु’नुवाइको आधारमा डेलीमेलले यस्तो दा’वी गरेको हो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **